Home Parenting Pregnancy Health သင်ကိုယ်ဝန်မရနိုင်ခြင်းရဲ့ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အကြောင်းရင်းများ
ကလေးယူဖို့ ကြိုးစားနေပေမယ့် ကိုယ်ဝန်မရနိုင်ဖြစ်နေတာလား? ဘာကြောင့် ဒီလိုဖြစ်နေရတာလဲ? မျိုးဥပုံမှန်မကြွေခြင်း၊ မျိုးပွားမှုစနစ်ဆိုင်ရာ ပြဿနာများ၊ သုတ်ပိုးအရေအတွက်နည်းပါးခြင်း (သို့) ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပြဿနာများစွာအပါအဝင် ဖြစ်နိုင်ခြေအကြောင်းအရင်းများစွာရှိပါတယ်။
အမျိုးသားတွေမှာ မျိုးမပွားနိုင်ခြင်းလက္ခဏာ နည်းပါးပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ဝန်မရနိုင်ခြင်းက ဒီအရာတွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ပထမဆုံးစဉ်းစားရမှာက သင်ဘယ်လောက်ကြာကြာ ကြိုးစားခဲ့လဲဆိုတာပဲ။ သင့်အနေနဲ့တော့ အမြဲတမ်းကြိုးစားနေသလိုမျိုး ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ သင်သိထားဖို့ က စုံတွဲအများစုက ချက်ချင်းကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းပါပဲ။
စုံတွဲတွေရဲ့ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာ ခြောက်လလောက်ကြိုးစားပြီးတာနဲ့ ကိုယ်ဝန်ရကြပါတယ်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းက ကိုယ်ဝန်ယူဖို့ ကြိုးစားပြီး တစ်နှစ်ကြာမှသာ ကိုယ်ဝန်ရလာတတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ လစဉ်လတိုင်း သင့်မှာ ကလေးရနိုင်ခြေမြင့်မားသော ကာလတွေမှာ လိင်ဆက်ဆံနိုင်ခြေမြင့်မားရပါမယ်။
သင့်ရဲ့ ကလေးမွေးဖွားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြဿနာရှိနေတယ်လို့ ထင်တယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်ဆီသွားသင့်ပါတယ်။ သင်က ၃၅ နှစ်နှင့် အထက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် အနည်းဆုံး ခြောက်လကြာ ကြိုးစားပြီးဖြစ်ရပါမယ်။ အကယ်၍ (၃၅) နှစ်ထက်ငယ်တယ်ဆိုရင် အနည်းဆုံး တစ်နှစ်ကြိုးစားပြီးဖြစ်ရပါမယ်။ ဒီအခြေအနေနှစ်ခုစလုံးကို ကြိုးစားမှသာ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသပါ။
လူ့သားတစ်ဦးသန္ဓေတည်ဖို့အတွက် မျိုးဥနှင့် သုတ်ပိုးလိုအပ်ပါတယ်။ မမျိုးဥမကြွေရင် ကိုယ်ဝန်မရနိုင်ဘူး။ Anovulation က အမျိုးသမီးတွေ မျိုးမပွားနိုင်ခြင်းရဲ့ အဖြစ်များသော အကြောင်းရင်းဖြစ်ပြီး ဒီအရာကလည်း အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၎င်းဖြစ်နိုင်ခြေအကြောင်းအရင်းတွေကတော့ အဝလွန်ခြင်း (သို့) ကိုယ်အလေးချိန်နည်းလွန်းခြင်း၊ မူလသားအိမ်မလုံလောက်ခြင်း (မျိုးဥ မထုတ်နိုင်ခြင်း)၊ သိုင်းရွိုက်လုပ်ဆောင်မှုအားနည်းခြင်း၊ အလွန်အကျွံလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
မျိုးဥထွက်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေ ကြုံတွေ့နေရသော အမျိုးသမီးအများစုက ရာသီသွေးမမှန်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ပုံမှန်ရာသီစက်ဝန်းတွေကလည်း မျိုးဥအထွက်များကြောင်း အာမမခံနိုင်ပါ။ သင့်အတွက် ပုံမှန်မဟုတ်သော ရာသီစက်ဝန်းတွေရှိနေမယ်ဆိုရင် တစ်နှစ်မကြိုးစားရသေးဘူးဆိုရင်တောင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
၃။ သင့်ပါတနာရဲ့ ပြဿနာ
အမျိုးသမီးတွေက ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကြခြင်းဖြစ်ပေမယ့် ဒီကိုယ်ဝန်အတွက် နှစ်ဦးစလုံးအားထုတ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မျိုးမပွားနိုင်သော စုံတွဲ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်က အမျိုးသားတွေဘက်က ချို့ယွင်းနေခြင်းကို တွေ့ရပါတယ်။ တစ်ခြားသော ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းက နှစ်ဖက်စလုံးမှာ မျိုးမပွားနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါတယ်။
နောက်ထပ်သိသင့်သောအချက်တစ်ချက်က အမျိုးသားတွေ မျိုးမပွားနိုင်ခြင်းရဲ့ သုတ်ရည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမရှိဘဲ သိသာထင်ရှားသော လက္ခဏာများရှိခြင်းနှင့် သုတ်ရည်နှင့် သုတ်ပိုးရဲ့ ကျန်းမာရေးကို တိုင်းတာသော စမ်းသပ်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ဆရာဝန်နဲ့ တွေ့အခါ နှစ်ခုစလုံးကို သေချာစစ်ဆေးပါ။
အသက် ၃၅နှစ်နောက်ပိုင်း အမျိုးသမီးတွေနဲ့ အသက် (၄၀) နောက်ပိုင်းအမျိုးသားတွေအတွက် ကိုယ်ဝန်ရဖို့ ပိုကြာနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချို့အမျိုးသမီးတွေ ရာသီလာချိန်မှန်နေရုံနဲ့ ၎င်းတို့ရဲ့ မျိုးပွားမှုကောင်းမွန်သည်ဟု ယူဆကြသော်လည်း မမှန်ပါဘူး။
အသက်အရွယ်ဟာ မျိုးဥအရည်အသွေးနှင့် အရေအတွက်အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သင့်လက်တွဲဖော်က သင့်ထက် ငါးနှစ်ထက် (သို့) ဒီထက်ပိုကြီးနေမယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ မျိုးပွားမှုဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေ ဖြစ်နိုင်ခြေကို တိုးမြင့်လာစေနိုင်ပါတယ်။
၅။ သင့်မှာ Endometriosis ရှိနေခြင်း
Endometriosis ဆိုတာ Endometrium ကဲ့သို့သော တစ်သျှူးတွေဟာ သားအိမ်အပြင်ဘက်တွင် ကြီးထွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ endometriosis ရှိသော အမျိုးသမီး ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းဟာ ကိုယ်ဝန်ရဖို့ အခက်အခဲရှိလိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းကြပါတယ်။
၆။ နောက်ခံဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများ
သိုင်းရွိုက်မညီမျှခြင်း၊ ဆီချိုရောဂါတွေအပြင် စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းကလည်း မျိုးမပွားနိုင်ခြင်းတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ မျိုးအောင်ခြင်းကို ထိခိုက်စေနိုင်သော ဆေးဝါးတွေရှိပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ဆရာဝန်နဲ့ မတိုင်ပင်ဘဲ ဆေးသောက်တာတွေ၊ ဆေးမသောက်တော့တာတွေ မလုပ်ပါနဲ့။ လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်သော ရောဂါတွေကလည်း မျိုးမပွားနိုင်ခြင်းကို ဖြစ်စေပါတယ်။
၇။ မျိုးမပွားနိုင်ခြင်းရဲ့ မရှင်းပြနိုင်သော အကြောင်းတရားများ
မျိုးမပွားနိုင်သော စုံတွဲတွေရဲ့ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းကြားမှာ ဘာကြောင့် ဒီလိုကိုယ်ဝန်မရနိုင်လဲဆိုတာ ဘယ်တော့မှ ရှာမတွေ့ကြပါဘူး။ တစ်ချို့ဆရာဝန်တွေကတော့ ဒီအရာကို ကောင်းမွန်သော ရောဂါရှာဖွေမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဟု သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ ရှင်းပြမရနိုင်သော မျိုးမပွားနိုင်ခြင်းကဲ့သို့သော အရာမျိုးမရှိသော်လည်း ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမရှိသော (သို့) ရောဂါအမည်မဖော်နိုင်သော ပြဿနာတွေဖြစ်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
Previous articleကလေးငယ်တစ်ယောက်ကို ကိုယ့်ကိုယ်ကို နှစ်သိမ့်တတ်အောင် သင်ပေးဖို့ နည်းလမ်း (၅)ခု
Next articleကလေးတွေမှာ သတိရှိရှိစားသုံးတတ်မှု (Mindfulness eating)ကို ဘယ်လိုဖွံ့ဖြိုးစေမလဲ?